Farmaajo oo u hambalyeeyay walaalkiis Abiy Axmed | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo u hambalyeeyay walaalkiis Abiy Axmed
Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee u hambalyeeyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay adduunka oo dhan ee u hambalyeeya Abiy Axmed, kadib guushii xisbigiisu ka gaaray doorashadii baarlamaanka ee dhacday bishii hore.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Farmaajo ku sheegay in Soomaaliya ay sii wadi doonto la shaqeynta Xukuumadda Abiy si loo sii xoojiyo xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyo guud ahaan midka Bariga Afrika.
“Waxaa si diirran ugu hambalyeynayaa PM Abiy Ahmed, Soomaaliya waxay sii wadi doonta la shaqaynta xukuumaddisa, si loo sii xoojiyo xiriirka laba geesoodka ah, si ay uga faa’iideystaan labadeenna shacab iyo gobolka oo dhan.” Ayuu yiri Farmaajo.
Heshiiskaas, wuxuu sababay in Farmaajo uu kumanaan askari oo Soomaali ah oo tababar loogu diray dalka Ereteriya u diray gobolka Tigray dhamaadkii sanadkii hore si ay uga qayb qaataan dagaalka ciidamada difaaca Itoobiya la galeen kooxda TPLF.
Askartaas Soomaaliyeed ayaa wali la la’yahay, waxayna wararku sheegayaan in badankood ay ku dhinteen dagaalkii Tigreega, halka qaarna ay maxaabiis ahaan u uqabatay kooxda TPLF oo dhawaan magaalada Mekelle kusoo bandhigtay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya.